Sida loo aamusiiyo sheekooyinka qof Instagram | Androidsis
Sida loo aamusiiyo sheekooyinka xiriiriyaha barta Instagram
Waqti ka hor, Instagram waxay soo bandhigtay waxqabadka carrab la'aanta. Thanks to shaqadan waa suurto gal ah in la aamusiyo xiriirada, si aynaan u arki doonin qoraaladaada shabakada bulshada. Laakiin annaga oo aan naga deynin raacitaanka dadkan. Ficil ay isticmaaleyaashu aad u jeclaayeen barnaamijka caanka ah. Thanks iyada waxaan sidoo kale aamusiin karnaa sheekooyinka.
Marka haddii qof aad raacdo barta Instagram uu soo galiyo sheekooyin badan, oo aan dantaada ahayn, waad ku sharxi kartaa inaad aamusiso. Tan macnaheedu waa sheekooyinkaasi waligood kama soo muuqan doonaan quudinta, laakiin iyadoon loo baahnayn inay joojiyaan raacitaanka qofkan shabakadda bulshada Aad u raaxo badan sidaa darteed.
Qaabka loo sameeyo tan waxay la mid tahay ka aamusinta xiriirka. Kaliya kiiskan, waxaan dooran doonnaa inaan aamusino sheekooyinkaaga Instagram, taas oo ah waxa aanan xiiseyneynin inaan aragno kiiskan. Hawl in ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay Facebook, kaas oo waliba kuu ogolaanaya inaad aamusiso sheekooyinka.
Waa inaan galnaa daabacaadda qaar ee qofkan shabakadda bulshada. Marka xigta, guji astaanta saddexda dhibic ee taagan, oo ku yaal qaybta midig ee sare ee shaashadda. Kadib menu ayaa ka muuqan doona shaashadda, halkaas oo aan ka helno dhowr ikhtiyaar.
Mid ka mid ah waa inuu aamusnaado, oo aan ku riixeyno. Marka, Instagram ayaa na weydiin doonta haddii aan dooneyno inaan ka aamusno dhammaan daabacadaha koontadan ama hadaan rabno inaan sheekooyinka iska aamino. Xaaladdan gaarka ah, waxaan xiiseyneynaa aamusinta sheekooyinka. Marka waxaan gujineynaa xulashadan.
Sidan oo kale, waan joojin doonnaa inaan ku aragno qofkan sheekooyinkiisa Instagram. Dib nooga tagi maayaan markaan galno arjiga, iyo inta kale ee sheekooyinka xisaabta ee aan raacno. Marka waxaan awoodi doonnaa inaan iska ilowno iyaga markasta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo aamusiiyo sheekooyinka xiriiriyaha barta Instagram
Honor 9X Pro wuxuu si rasmi ah uga muuqdaa teaser ay shaacisay shirkaddu
Sida looga saaro taleefan duug ah Google Play